Garsoore Mareykanka Ah Oo Si KMG Ah U Hakiyey Go’aanaddii Trump – Goobjoog News
Garsoore Mareykanka Ah Oo Si KMG Ah U Hakiyey Go’aanaddii Trump
Xaakim Maraykan ah oo ku sugan magaalada Setela ayaa soo saaray go’aan si kumeel gaar ah loo qaadayo xanibaaddii uu ku soo rogay maaxweyne Trump todobo dal oo badankoodu ay yihiin Muslimiin.
Xaakimka James Ruberte ayaa diiday is hor istaagid ka timid qareenno u dhashay dalka Maraykanka kaasoo lagu filinayo qo’aankii madaxweyne Donald Trumo.
Tallaabadaan ayaa keentay inay isku soo baxaan dibadbaxyaal tadobaadkii la soo dhaafay ,wasaaradda arrimaha debadda waddanka maraykanka ayaa sheegtay in 60 kun oo viza ah lala laabtay tan iyo markii uu soo baxay go’aanka madaxweynaha.
AQalka cad ayaa waxa uu ku timaamay go’aanka Donald Trum inuu yahay sharci kuna haboon isgoo sheegay in amarka madaxweynah uu yahay mid ilaalinaya muwaadiniinta oo isaga ay mas’uuliyad ay ka saarantahay ilaainta shacabka maraykanka .
Todobaadkii hore ayaa madaxweynaha dalka maraykanka waxa uu soo saaray amar lagu joojinayo dadka safarada ah oo soo galaya maraykanka kuwaas oo dhan todobo dowladood.
Uqefxq skgght online pharmacy Gzako...
Fgiipd vubbsg online canadian pharmacy Duuhx...
Jxvsem kzcvqz online pharmacy Snrlx...
Terrwu gpaops canada pharmacy Kcyuy...
cephalexin 500 mg capsules https://keflex.webbfenix.com/...